ဒါဆို ဗွေဇော်ဦး ပါကင်ဖွင့် မွှားလို့… ဈေးဦးဖောက် ပါရစေ..
ပါးစပ်ထဲက လျှာကို အရသာခံ စားသောက်ဖို့အပြင် အခြားဘယ်နေရာမှာ ထိထိရောက်ရောက် အာရုံခံ သုံးလို့ရဗာသလဲ ခင်ည….
အတွေ ့အကြုံ ရှိသူတွေထဲက တယောက်ယောက် ဖြေပါလိမ့်မယ်ခည
ကျနော်တော့ နောက်တစ်နေရာမှာ သုံးလို့ရတယ်လို့သိထားပါတယ်
ကြောင်တွေ ဆိုရင်တော့ သူ့လျှာသူသုံးပြီး အင်အင်းကုန်းကြတာပဲ။
သများ ပေါက်ကရ ဖြေလို့ မရဘူးဆိုရင် သများမပါဘူးနော်။
ဒါဆို အဝှာကို ဟိုဒင်းနဲ့ ဟိုဟာအတွက် မသုံးဘဲ အခြားဘယ်နေရာမှာ သုံးဂျသေးလဲ…
အရင်တုန်းကတော့ ဖိုရမ်လုပ် ရွာပြင်ထုတ်တဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခု လုပ်ခဲ့ဖူးသေးတယ် ..
အားနွဲ့သူများဆိုတဲ့ အားကြီးသူများသာ ဖြေစေလိုပါတယ်
မရခင်ကတော့ မဝှေ့တတ်တဲ့ ကျွဲလိုလို
ဘယ်လောက်သင်သင် စကားမပြောတတ်တဲ့ သာလိကာ၊ ကြက်တူရွေးလို့ဘဝကနေ
ပုံတင်ရင်တောင် မလှမှာစိုးလို့ ငါးသလောက်ပြုံးလေးနဲ့
စကားပြောရင်တောင် အသံထွက်မှာစိုးလို့ သွားခေါလေးကို လက်နဲ့ကာလို့
လမ်းလျှောက်ရင်တောင် တင်ပါး ဘယ်တစ်ဖက်၊ ညာတစ်ဖက် မညီမှာစိုးလို့
သေချာအောင် တစ်ချက်ချင်းစီတက်အောင် လမ်းလျှောက်နေရတဲ့
ရပြီးသွားတော့ စပိန်က ကျွဲရိုင်းတွေလို မြင်မြင်ရာလိုက်ဝှေ့ချင်
တော်ပါတော့ပြောတာတောင် စက်သေနတ်ကြီးနဲ့ သတ်ကွင်းထဲဝင်လာသမျှ မြင်မြင်ရာပြစ်ချနေသလို
ပုံတင်ရင် ယောကျာ်းမပါမှာစိုးလို့ (ယောကျာ်းအကောင့် သီးသန့်သာပြောပါတယ်၊ သူတို့ကတော့ အပျိုလေးလိုပဲ တစ်ယောက်တည်း)
ဘာလို့ ပုံတွေခဏခဏချိန်းနေရတာလဲ၊ ဘယ်ကောင်မကို မြှုဆွယ်နေတာလဲလို့
ဝါရင့်၊ သဘာရင့်များ ဆရာစားမချန် ( ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြီး )
ငါမေးဒဲ့လျှာမေးဂွန်းနဲ့ စပ်ဆက်နေသကွဲ့.. လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွား နင်မသိလေသလား… ကောင်းကောင်း လျှာမကျွေးသရွေ့တော့ ဂျီတိုက်နေဦးမှာဗဲ.. မယုန်ဆမ်းကျိ ငမ်ကျိကျိ… မှတ်ပါလေ ငါးပိ…
အင်းအဲဒါ ငါ့လင်ငါ့လင်ဆိုတဲ့ မမြဲတဲ့ အတ္တဘောကြီးကို ဆွဲလမ်းသွားရှာလို.ပါကွယ်… ကဲ ဒကာလေး တရားမှတ်တရားမှတ်.. ကွဲ.
လူမှုကူညီရေးအတိုင်ပင်ခံကဏ္ဍ တဲ့လား။ သိပ်ကိုရှိသင့်တာပေါ့ အလက်ဇင်းရေ။ ဟိုအရင်က ရီးဒါးစ်ဒိုင်ဂျက်မှာလားမသိ ဒါမျိုးလုပ်ဖူးတယ်။ တဟုန်ထိုးကို နာမည်ကြီးခဲ့တာ။ စပါယ်ရှယ်မေးခွန်းတစ်ခုကြောင့်ပေါ့။ အဖေနဲ့သား ဘယ်သူ့ကို ယူရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ မေးတဲ့လူကလည်း အတည်၊ ဖြေတဲ့လူကလည်း အတည်။ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းပါ။ ထားပါလေ။
ဒီကဏ္ဍမျိုးက ဒီလိုဂဇက်မှာ တကယ်ကို ရှိသင့်ပြီ။ ဖိုရမ်လို ရွာပြင်ထုတ်ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အတိုင်ပင်ခံ ကဏ္ဍအဖြစ် ရှိနေသင့်တာပါ။ ပြီးတော့ တစ်ခုခုသိချင်လို့ မေးချင်ရင် အဲဒါကို ပို့စ်တစ်ပုဒ်အဖြစ် တင်ရဦးမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မေးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အလက်ဇင်း ပြောသလို ကွန်မင့်ထဲမှာ ဝင်မေးလို့ရရင် မေးကြပါလိမ့်မယ်။ ဖြေတဲ့လူကလည်း ကွန်မင့်ထဲမှာ ဝင်ဖြေ၊ ပြီးတော့မှ အလက်ဇင်း ပြောသလို မော့မော့က မေးခွန်းတွေကို ပို့စ်ထဲ ပြန်ထည့်ပေးရင် ဖတ်ချင်တဲ့လူက လွယ်လင့်တကူ ရှာဖတ်နိုင်တယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကို သေချာပြန်စဉ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်၊ အရွှတ်အနောက်တွေကို ကြာရင် ဖျက်လိုက်၊ အဲဒါဆို ကျစ်ပြီး ဖတ်ရတာ လျင်မြန်သွက်လက်မှာ။
ကိုယ်က ပစ္စည်းတစ်ခုခု ဝယ်ချင်လို့ အစစ်အမှန်သိချင်ရင်၊ ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် အဆက်အသွယ် သိချင်ရင် ဒီအတိုင်ပင်ခံထဲမှာ ဝင်မေးလိုက်၊ လက်မနှေး ဖြေပေးနိုင်တဲ့လူရှိနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စ ဆုံးဖြတ်စရာရှိရင် ရွာထဲဝင်မေးလိုက်ရင် ဆုံးဖြတ်တာလည်း မှန်သွားနိုင်တယ်။ ရွာကလည်း ရွာပိုပီသသွားတာပေါ့။ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကြပြီဆိုတော့လေ။
အခု အလက်ဇင်း ပြောတဲ့ကဏ္ဍကတော့ စိတ်ကူးအရမ်းကောင်းနေပြီ။ သူကြီးက စတစ်ကီ ချိတ်မပေးရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ပြီးတော့ အမေး နွားကျောင်းသား အဖြေ ဘုရားလောင်း ဆိုတာရှိသေးတယ်။ မေးတဲ့လူက အရမ်းတော်နေတော့ ဖြေပေးနိုင်တဲ့လူ မရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟီး
ပြီးတော့လေ ကဗျာပြခန်းက ဖျက်သိမ်းလိုက်တာ သေချာသွားပြီလား။ သေချာပြီဆိုရင် အန်တီပဒုမ္မာ ပြောသလို ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေ ဘာတွေ မလုပ်နိုင်သေးခင်မှာ ဒါမျိုးလေး တင်ပေးထားရင် သဂျီးကို ကျေးဇူးအကြီးကြီး တင်ပါမယ် ။
ကဗျာပြခန်းကတော့ နားထားတာ သေချာနေပါပြီ။
ကဗျာချစ်သူအဖွဲ့ကတော့ အလုပ်လက်မဲ့ ရှိနေပါသေးတယ်
အဲဒီတုန်းကတော့ ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားလို့ လေထဲပျောက်သွားသပေါ့…..
အခု လူငယ်ခြေတက်ကလေးတွေ ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုပါတယ် ….
မေးတာမှာရော ဖြေတာမှာပါ တတ်အားသရွေ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ပါမယ် နော …
နီလို လူတွေက ထိုင်ကြည့်နေမှတော့ဖြင့်
ကြုံတဲ့သူက ကြုံသလို၊ သိတဲ့သူက သိသလို အဖြေပေးကြမယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှအဖြေမပေးကြတာမျိုး ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဒါပေမယ့် ဖြေမယ့်အဖွဲ့သီးသန့်ဖွဲ့ထားရင်လည်း တာဝန်ရှိယူနိုင်ကြပါ့မလား။
တစ်ခုရှိတာက ဒီရွာထဲကသူတွေကလည်း သိတဲ့အတိုင်း အရွှန်းဖောက်ကြတာက များလေတော့ တခါတလေမှာ တကယ်သိချင်လို့ မေးတဲ့သူကို လှောင်ပြောင်သလို ဖြစ်သွားမှာလည်း စိုးမိတယ်။
ရွာသက်ရင့်နေကြတဲ့၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးနေတတ်သူတွေက ကိစ္စမရှိပေမယ့် ….
တချျို့တလေစိတ်နုတဲ့သူတွေ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်စရာဖြစ်သွားမှာလည်း စိုးရသေးတယ်။
ဒါ့ထက် ဒီရွာမှာ ဒီသူငယ် အလိမ္မာဆုံးပဲ။
အန်တီမမ ဆွေးနွေးသွားတာ တွေ . . .
ဟုတ်ပါတယ် ။ စဉ်းစားစရာပါ။
တာဝန်ကြီးတစ်ခုလို ထမ်းထားရမယ့်အဖြစ်မျိုး မရှိစေချင်လို့
ဖြေမယ့်အဖွဲ့ သီးသန့် မဖွဲ ့ထားဘူးဆိုတော့ဂါ. . .
တာဝန်သိ မေတ္တာထား စိတ်ကလေးနဲ့
မျက်ကွယ်မပြု ဝင်ဖြေပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။
အရွှမ်းဖောက်သွားတဲ့ အဖြေစကားတွေကို comment ထဲမှာပဲ ထားခဲ့ပြီး အပျော်အနေနဲ့ ရှိနေစေပါမယ်။
အမေးအတွက် တကယ် ထိရောက်တဲ့ အဖြေတစ်ခု နှစ်ခုကို ရွေးထုတ်ပြီး
ပိုစ့်ထဲ ရွေးထည့်မယ် ဆိုရင်ကော. . . .
ဆန်းနေတုန်းတော့ စမ်းလို့ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ် ဦးကြီး
အစီအစင်ကတော့ကောင်းပါတယ် ဒါပေသိ နာက အတီပေါလို့ကို မရဝူးရယ်
နိ ကို မေးရမဲ့ မေးခွန်း နာ တိဒယ်။
တူညားကို ဘို ချောက်ချရမုန်းတို့
တူညားကို ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ဘို ပြောရမုန်းတို့
တူညားကို နစ်နစ်နာနာ ဘို လုပ်ရမုန်းတို့ သိပ်တော်တာ။
အိုက်လို နာမယ်ဆိုးအောင် ပြောပါနဲ့အေ… ပလန် ဘီ… စီ.. ဒီ ထားတတ်တာပါ ..
ပလန်အေ နဲ့ လျောလျောရှုရှု ပါမလာသူဒွေ အတွက် စီဇင်ထားတာ
ဒီဂျီးဒေါ်နှစ်ယောက် လည်း ဒီအင်္စီအစဉ်မှာ မပါမဖြစ်ပဲ
သတင်းအချက်အလက် ရှာဖွေစုဆောင်းတာမှာ အားကိုးရမှာ
ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြိုဆိုပါတယ်။ လူငယ်တွေဦးဆောင်ပေါ့။ ဗဟုသုတနဲ့ပြည့်စုံသူများဝင်ဖြေ။ ငါတို့ကတော့ မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာများကို မှတ်သားရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါမည့်အကြောင်း
တီသဲရဲ ့အတွေးအခေါ်နဲ့ အပြောအဆိုတွေကိုလည်း
အဘ အောင်သိမ်းဠင်း တို့ကတော့ လုပ်ဗီ …
ပီးမှ တခြမ်းနဲ့ မထားခဲ့နဲ့ နော…
သူ စ စပြီး တဂျားနဲ့ နာ ရန်ဖြစ်ရတာ အဖတ်တင်တာပဲ။
အစပျိုးရမယ့် တာဝန် ယူပါရစေ
ကျန်တာတော့ ပို တာဝန်ယူနိုင်သူတွေလက်ထဲ အပ်ပါရစေ
ရေကန်အသင့်၊ ကြာအသင့် ဆိုသလိုပါပဲ ….။ ခုလို ကျနော့်အတွက် ကသိကအောက်နိုင်လှတဲ့ အချိန်သမယမှာ မေးမြန်းနိုင်တဲ့ ကဏ္ဍလေးတစ်ခုက အဆင့်သင့် ဆီးကြိုလို့ နေပြန်တယ် ..။ ဝမ်းသာလိုက်တာ ဆရာရယ် …။ ကျနော် အခုတလော ပြဿသနာ ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။ အဲ့ဒီပြသနာနဲ့ စားလို့မဝင် အိပ်လို့မပျော် ဖြစ်နေတယ် ဆရာ။ အဲ့ဒါလေး ဆရာ ကူညီနိုင်ရင် ကူညီဖြေရှင်းပေးပါဦးနော်။
ကျနော့်ရဲ့ ပြသနာကတော့ အီးအီးပါတဲ့အခါ ဘာကြောင့် အသံတွေ ပါလာရတာလဲ ???
အဲ့ဒါပါပဲ ဆရာ …။ ကျနော် ခေါင်းတွေလည်း ကိုက်နေပြီ …။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ …။
ကိုက်နေတဲ့ခေါင်း ငါးရံ့ခေါင်းတို့ဘာတို့ကို အသာချထားပြီး ကျနော် ပြန်ဖြေတာကို ဖတ်ပါဦး။
မောင်ရင် ပြောတဲ့ အီးအီးပါရင် အသံတွေပါလာတာက
မောင်ရင် အစာစားတဲ့အခါ အသံတွေပါ ထည့်စားမိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အသံတွေ ထည့်မစားပဲ ရှောင်လိုက်ပါ
ပြီးတော့ အီအီးပါတဲ့အခါ နားထဲ ဂွမ်းဆို့ပြီး ပါ ပါ
ဒါဆိုရင် ဒီပြဿနာ ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကလောဘားလည်း ဆွဲဖို့ မမေ့နဲ့ဦး
“နောက်ပြောင်ကာမေး အပျော်အပျက်ရေး” အဲလို အဲလို တွေ ဖြစ်လာကြုံလာရင်ရော စိတ်ဆိုးတော်မူကြ မှာလား
“အမေးတစ်ရာ အဖြေတစ်ခု” ဘဲဖြစ်ခဲ့ရင်ကော ရွာသူားတွေ ကူညီယိုင်းပင်စိတ်မရှိဘူးဆိုပြီး ဝါးလုံးရှည်နဲ့သိမ်းကာပြော မှာလား
“အမေးပေါ် အမေးဆင့်လို့ အဖြမထွက်နိုင်” ရင်ကော စိတ်ပျက်သွားကြမှာလား
“အမေးကို သေချာဖြေပေးလိုက်တဲ့အပေါ် ဟာသာနှောပြန်ရေး” ရင်ကော ဖြေသူစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်မလား
အဲဒီတော့ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ မေးပါဆိုရင်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုနိုင်သလို စည်းလွတ်ဝါးလွတ် မေးချင် ရာမေး ဖြေချင်သလိုဖြေ ထားပြန်တော့ အဖိုးအခမသိဆိုသလိုဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အင်း စဉ်းစားကြလော့ ကလေးတို့ရေ။
ဒါက လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှ မဟုတ်တာ
အမေးပေါ် အမေးဆင့်ပြီး အဖြေနည်းခဲ့ရင်တော့ ဒီကဏ္ဍ မအောင်မြင်ဘူး လို့သတ်မှတ်ပြီး ရှေ ့မဆက် ပဲ ရပ်တန့်ရုံပါပဲ။
ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်ပျက် စိတ်ဆိုးစရာမှ မရှိတာ. . .
သေချာဖြေပေးသူရဲ့ အဖြေကို ကရော်ကမယ်တော့ ဘယ်သူမှ မလုပ်လောက်ပါဘူး ။
စည်းလွတ်ဝါးလွတ် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီး ဒီကဏ္ဍ ကြီး
တန်ဖိုးမဲ့သွားလောက်အောင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီလူတွေ ဒီအတွေးအခေါ်တွေက
လျော့တိလျော့ရဲ တော်၏ရော်ရိ လူတွေ မှ မဟုတ်တာ
ကစဥ့်ကလျား အတွေးအခေါ်နဲ့ လူတွေမှ မဟုတ်တာ နော်
ဒီက မိန်းမ မဟုတ်တော့…. ကြားဖူး သမျှလေးနဲ့ဖြေသွားမယ်နော်….
သန်းဆိုတာ လျှော်မှရယ်လို ့မဟုတ်ဖူး….
တကယ်လို့ ဒီကဏ္ဍ ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်
ဒီ မမနန်တော်ရာသူရဲ့ အမေးနဲ့ အဖြေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားဖို့ပါ. . . .
အကြောင်း ညီညွတ်လို ့
ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်. . .
နီ့ဟာက ရွာစီ၊ မစီတော့ မသိဘူး
တကယ် ဆူမယ်ဆိုရင်တော့ တကယ် မလုပ်ပါဘူး
လု မှတော့ မေးချင် တာ တပုံကြီးရှိနေတယ်
အဟဲ ကွက်တိ ပဲပေါ့
မှတ်သားစရာပါပဲညီမရေ…၀.ယ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ မဝယ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ဒီလောက်ပြောပြနိုင်ရင်ပဲမဆိုးလှပါဘူး။
နာ သိချင်တာရှာလိုက်တိုင်း ဂဇက်က ပိုစ့်တွေ တက်တက်လာတာများပါတယ်..
အဲ့ အရင်ကဆို ဒိအတိုင်းပဲ ဖတ် ၊ မှတ် ၊ သူများပြောတာတွေကြည့်သွားရုံ လေ့လာသွားရုံပေါ့နော်..
ကဏ္ဍသပ်သပ်လေး ခွဲထားတော့လည်း မသိတာရှိ မေးရတာလွယ်တာပေါ့နော်…
သန်းကိစ္စကတော့ အလွယ်ကလေးပါ။ ခြတို့ ပိုးဟပ်တို့သတ်တဲ့ စပရေးဘူးလေ၊ အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာရှိတယ်။ တစ်ဘူးကို ၂၀၀ဝ လောက်ပဲပေးရတယ်။ ယိုးဒယားလို ရေးထားတာဆိုတော့ နာမည်မပြောတတ်ဘူး။ ခြသတ်တဲ့ စပရေးဘူးလို့ပဲ ပြောကြတယ်။ အဲဒီစပရေးဘူးနဲ့ ဦးခေါင်းကို ၄-၅ချက်လောက် တရှူ းရှူးဖြန်းပြီး မျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြစ်ဖြစ်၊ အဝတ်စဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းကို ၅မိနစ်လောက်ပတ်ထားလိုက်ရင် တစ်ခါတည်းနဲ့ ပြီးပါပြီ။ သန်းဥတွေပါ သေတယ်။ စပရေးဘူးနဲ့ဖျန်းချိန်မှာ မျက်လုံးမှိတ်၊ အသက်အောင့်ထားနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတယ်နော်။ ဒါပေမယ့်လည်း အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ ပြီးရင် ခေါင်းလျှော်ချလိုက်ရင် သန်းသေတွေ ပါသွားလိမ့်မယ်။ သန်း လုံးဝပြောင်သွားစေတဲ့နည်းပါ။
ပုရုပ်လုံးကိုကြိတ်ပြီးအုန်းဆီနဲ့လိမ်း ခနနေလျှော်ချကြည့်ခိုင်းတာတော့ တော်တော်ကျတယ်ပြောတယ်။နောက်ကျထပ်ရောက်လာဆိုပဲ။
.. ထောက်ခံပါတယ်.. မေးစရာရှိတိုင်း ဂူးဂဲ သွားမေးတာ international ကိစ္စတွေအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် local ကိစ္စတွေကျတော့ အချင်းချင်းမေးရတာအဆင်ပြေတာပေါ့.. connection နှေးလို့ ဂေဇက်ကြီးတက်မလာတာပဲ ခက်တာ..
ရဲဘော် ဆက်လုပ် ;)
အဲ့ဒီမေးခွန်းကြီး တွေ့တော့ သန်းသတ်နည်းပြောပြရင် ပါဏာတိပါတာ တွေ အမှုပတ်နေမစိုးလို့ ရှောင်နေတာ၊ဈေးကြီးပြီး ဒီမှာမရတာကြီး သဂျီးက ညွှန်းနေတော့ တတ်သည့်ပညာ မနေသာတော့ဘူး။
Scabicide အဆီကို ရေ ကြည်ကြည်နဲ့ ၅ဆရောရင် ဝဲလိမ်းလို့ရပါတယ်။၁ဝဆ ရောရင် ကြမ်းပိုး၊သန်း သတ်လို့ရပါတယ်။(အဆတွေတော့ မေ့တေ့တေ့ဖြစ်နေပြီ၊ခန့်မှန်းခြေပဲမှတ်ပါ။)
သာမီးလည်းပါဏာတိပါတာသိပ်ကြောက်တာပါ ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်လဲဆို ပိုးဟပ်တွေရှိတာတောင် အင်းဆက်ကေလာမဖြန်းဝံ့ဘူး
သန်းသတ်လို့ ပါဏာတိပါတာကံဖြစ်မယ်၊ ပိုးဟပ်သတ်လို့ ပါဏာတိပါတာကံဖြစ်မယ် ဆိုရင် အဲဒီ ငရဲပြည် အထင်ကြီးစရာကို မရှိတော့ပါဘူးကွယ်၊ စောစောကသွားမလို့ဟာ ခုတော့ အထင်မကြီးလို့ မသွားတော့ဘူး
အဲဒီ အလက်ဆင်း အကြားအမြင်ရနေပြီ၊
အပေါ်က ပို့စ်ထဲ သေချာပြန်ဖတ်တော့ ဒီဆေးပဲ ညွှန်းပေးထားမိတယ်။
အန်တီပဒုမ္မာ ညွှန်းတဲ့ဆေး (အဖြေစကား) ကိုလည်း
ပိုစ့်ရဲ့ အဖြေစာရင်းထဲ ထည့်ပေးပါဦးမယ်။
ခေါင်းမှာပေါက်တော့ ဒက်၊ကိုယ်ပေါ်ပေါက်တော့ ပွေး၊တင်ပါးမှာပေါက်တော့ ဂျွတ်လို့ ခေါ်တယ်။အတူတူချည်းပါပဲ၊ ဘိုလိုတော့ Ring Worm ခေါ်ပြီး မှို ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါပါ။
Ketoconazole/Fluconazole/Clotrimazole /Griseofulvin စတဲ့ ဆေးတွေ လိမ်းရပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲတော့ Fungiderm/Koniderm/Gentalene-C/Gentrisone စတဲ့ နာမည်မျိုးစုံနဲ့ ရှိပါတယ်။
သများကတော့ အချစ်ရေးကိုပဲ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးပါရစေ။
ရန်သူတွေလို မုန်းတီးပြီး ကွဲချင်သလားးး
သများ ပြောသလို လိုက်လုပ်ပြီး ရင် ပြီးပြတ်သွားစေမယ်လို့ အာမခံပါတယ်။
သများကတော့ အဲဒါပဲ တာဝန်ယူနိုင်တယ် ဆက်ဆက်။
ဘိုလုပ်ရမဲဆိုတာ အကျန် တောင်းပါ့မယ်ခည
ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ ပိုက်ဆံအများကြီးရတဲ့နည်းကို သိချင်ပါတယ်
အဲဒါ . . .
ကျနော်လည်း သိချင်နေတယ်. .
သိချင်တာ မေးမယ် သိရင် ဖြေပေးမယ် သူများ အမေးအဖြေတွေ ဝင်ဖတ်နေပါ့မယ်
အနော်က ခုမှ ဆံပင်ပေါက်ကာစဆိုတော့ တတ်နိုင်သလောက်လေး ထိန်းသိမ်းမယ် စိတ်ကူးပါတယ်..
တရော်ကင်ပွန်းက ဗောက်မတွယ်သန်းမထပါဘူး။အံစရာလိုပဲ ချွဲတတ်ပါတယ်။
ကျမမှာလည်း သားသမီးပညာရေး မေးစရာရှိတယ်။ ရ နှစ်အရွယ် ကျမသမီးကို တရုတ်စာသင်ပေးသင့်ပါသလား။ ရွာထဲက နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတရှိသူများကို အားကိုးပါတယ်နော်။ ဘာဖြစ်လို့ ကျမ မေးသလဲဆိုတော့ – ဒီခေတ်ကလေးတွေ ၁ဝတန်းအောင်ပြီးရင် တခြားဘာသာစကားသင်တယ်။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန် စတာတွေ သင်ကြတယ်။ တရုတ်စာကိုကျတော့ သိပ်မသင်ကြဘူး။ တရုတ်သွေးပါတဲ့သူတွေသာ သင်ကြတယ်။ ကျမစိတ်ထဲမှာ တရုတ်က သိပ်အင်အားကြီးတယ်လို့ ထင်နေတယ်။ ကမာ္ဘ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာ သူတို့ ခြေကုပ်ယူထားပြီးပြီလို့ ကျမ ထင်နေတယ်။ ကျမသမီးကို တရုတ်စာသင်ပေးဖို့ စီစဉ်တော့ မောင်နှမဆွေမျိုးတွေက သဘောမတူကြဘူးလေ။ အဆင့်သိပ်မရှိတဲ့ ဘာသာစကား၊ သင်ယူဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဘာသာစကားအတွက် အချိန်ကုန်မခံသင့်ဘူးလို့ သူတို့ကမြင်ကြတယ်။ ပြီးတော့ တရုတ်ကလည်း လူမှုတော်လှန်ရေးဆိုပြီး ခပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတော့ ရုရှားလမ်းစဉ်နောက်လိုက်ပြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်ဦးမှာပါ လို့ ပြောတဲ့လူကလည်း ရှိနေပြန်တယ်။ ဒီတော့ ကျမ ဇဝေဇဝါဖြစ်ရပြီပေါ့။
ဒုတိယတစ်ချက်က ကလေးကို ဘာသာစကားသင်တာ အသက်ငယ်လေ ကောင်းလေပဲလို့ ကျမယုံတယ်။ ကလေးရဲ့ သင်ကြားမှုစွမ်းရည် အမြင့်ဆုံးရှိနေတဲ့အချိန်၊ ဦးနှောက်တန်ကြေး ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ မိဘက ရွေးချယ်မှုမှားသွားတဲ့အခါ နစ်နာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်မှာ သင်ထားတဲ့ ပညာတစ်ခုက နောင်တစ်ချိန်မှာ အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် နစ်နာတာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ကျမ ရွေးချယ်ချက် မမှားချင်လို့ ရွာထဲက နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတရှိသူတွေကို တိုင်ပင်ကြည့်တာပါ။ တရုတ်စာ သင်ထားတာဟာ တချိန်မှာ အားသာချက်တစ်ခု သေချာပေါက်ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။
စတုတ္ထအချက်ကတော့ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းစာသင်ကြရတော့မယ်လေ။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကတော့ လွတ်မယ်ထင်တယ်။ အဲဒါ လွတ်မလွတ် မသိဘူး။ သင်သာသင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးငယ်ငယ်လေးက မြန်မာစာရယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာရယ်၊ တရုတ်စာရယ်၊ တိုင်းရင်းစာရယ် ဆိုရင် ဘာတစ်ခုမှ ချွန်လာတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျမသမီးရဲ့ အနေအထားကတော့ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းပါတယ်။ တီထွင်ဉာဏ် သိပ်မရှိဘူး။ ဝေါဟာရ မှတ်မိနိုင်စွမ်းမြင့်ပြီး သချင်္ာ ညံ့ ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ တော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် တရုတ်စာကို သဘောထားပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်းနဲ့ သင်ပေးမယ့် ဆရာမ နဲ့ သင်ဖို့ စဉ်းစားကြည့်တာပါ။ တရုတ်စာ သင်သင့်ပါသလား။
ကျုပ်သမီးလည်း တရုတ်စာတွေ.. သင်ခိုင်းမယ်တွေးတယ်.။
ကလေးကို ဘာသာစကားသင်တာ အသက်ငယ်လေ ကောင်းလေပဲလို့ သေချာပါတယ်..။
အသိမမှားရင်.. အသက် ၉-၁ဝနှစ်အထက်မှ..ယူအက်စ်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေ.. အမေရိကန်အသံထွက်မပီကြဘူး..။ အဲဒီအောက်ပိုင်းက.. နေးတစ်လိုပီကြတယ်..။
ကလေးကို တရုတ်စာသင်ပေးရင် အင်္ဂလိပ်စာမှာ ညံ့သွားမယ်လို့မထင်ပါ..။
ဒီလသတင်းစာရဲ့ ထူးချွန်ကလေးကဏ္ဍမှာ. ဗမာအမေရိကန်ကလေးတယောက်အကြောင်းပါတယ်..။ အဲဒီကလေးက.. ယူအက်စ်မှာမွေးတာ…။ တရုတ်..စပင်းန်စ် ကိုပါသင်နေပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်ရေးတတ်တယ်..။
လူသိပ်မသုံးတာမို့.. သင်ကိုသင်ရမယ်ဆိုရင်တောင်.. နောက်ဆုံးစာရင်းအဖြစ်.. တို့သင့်ကြောင်း..။
with an updated Top 20 list of the most widely spoken languages by “First language” speakers. Mega languages around the World – List of Chinese, English, Spanish, Arabic, Portuguese, and French speaking countries.
“Kids this age are developing language skills rapidly, and they quickly absorb … “They can learn to understand new words in two different languages at an …
Bilingualism does not increase (or decrease) intelligence. There are bilinguals of all degrees of intelligence, just as there are monolinguals of all degrees of intelligence.
လုံးဝ လုံးဝ သင်ပေးသင့်ကြောင်း အဆိုပြုပါတယ် ။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လောက်ဘဲ အစိတ်စိတ်အမွှာအမွှာကွဲကွဲ လူဦးရေ သန်းတစ်ထောင်ကျော်ဆိုတာက ဘယ်နားသွားသွား တွေ့ဦးမှာမို့ လုံဝ မမှားနိုင်ပါ ။ နောက်ပြီး ဘာသာစကားဆိုတာ တစ်ခုနှစ်ခုဘဲ သင်လု့ိရတာ မဟုတ်ပါ ဆိုတော့ ငယ်ငယ်ထဲက သင်ပေးမဲ့သူရှိရင် အဆင်ပြေရင် ဘယ်ဘာသာမဆိုသင်သင့်ကြောင်းပါ ။
နောက် ကျွန်တော့်ကို သင်တန်းတက်အောင် လျှောက်ပြောခဲ့ရင်တော့မသိဘူး ။ နိုင်ငံခြားက ဘာသာစကားသင်တဲ့ သင်တန်း တစ်ခုက ပြောခဲ့ဘူးပါတယ် ။ ဘာသာစကား နှစ်ခု တတ်သူဟာ သုံးခု လေးခု တတ်ဖို့ ပိုလွယ်ပါတယ် ဆိုပြီးး။
တရုတ်ဘေးက နိုင်ငံဆိုတော့ တစ်ရုတ်လိုတတ်ထားတာ လုံးဝ လုံးဝ မှားမည်မဟုတ်ပါ ။ လုံးဝ သင်သင့်ကြောင်းပါ ။ ဥပမာ .. တိုင်းရင်းစကားတတ်တဲ့ ကလေးတွေမှာ တိုင်းရင်းသားစကား မြန်မာစကား အင်္ဂလိပ်စကား ထူးချွှန်စွာ ပြောနိုင်သူတွေ အများကြီးပါ ။
သဂျီ းနဲ့ ကထူးဆန်း
ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမတင်မကျဖြစ်နေတာ ခုမှပဲ စိတ်ရှင်းရှင်း ဆက်ဒိုးရတော့မယ်။ ကထူးဆန်း ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ကြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်လည်း တရုတ်လူမျိုး သန်းတစ်ထောင်က ကမာ္ဘပေါ်မှာ အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ ရှိနေမှာပဲဟာ ။ အိမ်နီးချင်းတွေဆိုတော့ ကြောက်ရတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့ရုံးသုံးမှာကိုက.. အင်္ဂလိပ်နဲ့..စပင်းနစ်၂မျိုး ဥပဒေနဲ့ပြဌာန်းထားတာမို့.. စပင်န်းနစ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့စာရွက်တွေ.. အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့တွဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်..
အဲဒီအတိုင်းပဲ.. သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တော့.. လူဦးရေအမျိုးအစားအလိုက်အုပ်စုတွေခွဲတာမို့.. အဲဒီလူမျိုး(နိုင်ငံသား)တွေအနေများတဲ့.. ဒေသ… ရပ်ကွက်တွေမှာ.. ဆိုင်ရာဘာသာစကားနဲ့.. ရုံး..အလုပ်စာရွက်တွေထားပေးရ(ရ)ပါတယ်..။
မြန်မာတွေအနေများတဲ့.. ရပ်ကွက်တွေမှာ..တရုတ်တွေလည်းများတာမို့.. ရုံးစာတွေ.. ကားလိုင်စင်ရုံးတွေ.. ဘဏ်တွေမှာ.. တရုတ်လိုရေးထားတာတွေအများကြီးပါ..
အမေရိကားထဲအဝင်.လဝက.ဖေါင်ဖြည့်တာမှာလည်း.. မှတ်မိသလောက်.. တရုတ်..ဂျပန်.. ဗီယက်နမ်တောင်ရှိတယ်ထင်တာပဲ..။
ကလေးအတွက် heavy မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ တရုတ်စာ ထပ်မံ သင်ကြားတာကောင်းပါတယ်။ ဘာသာစကားတွေ တတ်ကျွမ်းထားတာဟာ အားသာချက်တရပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း အဆင့်မြင့် နည်းပညာတွေ လေ့လာဖို့အတွက်က အင်္ဂလိပ်စာသည်သာ အရေးအပါဆုံးပါ။
.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီမေးခွန်းစဉ်စားရတော့မှာမို့လို့ ဝင်ပါလိုက်ဦးမယ် (ကလေးကတော့ ခုမှ မှောက်တုန်းရှိပါသေးတယ်)..
.. နောက်တချိန်လို မလိုဆိုတာကတော့ မသေချာဘူး.. ကိုယ့်ကလေးကကြီးလာရင် ပြည်တွင်းမှာပဲ Profession/Own Business တစ်ခုပုံမှန်လုပ်သွားတာဖြစ်နိုင်သလို စင်ကာပူသွားကျောင်းတက်မယ်၊ အလုပ်လုပ်မယ် နိုင်ငံတကာကလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံမယ် ဆိုတာလည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်.. အဲ့တော့ ငယ်တုန်းသင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အရှုံးမရှိပါဘူး.. ခက်တာက အပြိုင်အဆိုင်များလှတဲ့ အခုခတ်ပညာရေးထဲမှာ နောက်ထပ်ဝန်ပိမှာ ဆိုးရတာပဲဗျ..
Twitty နဲ့ ကိုဇော်သန့် ပြောသလို ခလေးအတွက် ဝန်မလေးရအောင်လို့တော့ ကြံဖန်ပေးထားပါတယ်။ ဒီခေတ်ခလေးတွေ အတော်သနားဖို့ကောင်းတယ်။ ကျူ ရှင်ကို မဖြစ်မနေတက်နေကြရတယ်။ မတက်လို့မဖြစ်ဘူးလေ၊ လူတစ်ယောက်ဟာ အလွန်ဆုံး ၄နာရီပဲ စကားပြောနိုင်တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ လက်တွေ့မှာ ၂နာရီလောက် ပြောရရင်ကို အာပေါက်သွားပြီ။ ဆရာမတွေဟာ ကျူရှင်မှာ အာပေါက်အောင် ပြောထားပြီးပြီဆိုတော့ ကျောင်းမှာ သိပ်စကားမပြောနိုင်ကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ခလေးတွေကို ကျူ ရှင်ထားတာ မှန်ပါတယ်။ ကျမကတော့ ခလေးကို ကျူ ရှင်မထားပါဘူး။ အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင် နည်းနည်းသင်ပေးရုံနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခလေးကို ဟဲဗီး မဖြစ်စေဘဲ တရုတ်စာကို ပျော်ပျော်ပါးပါး တတ်သွားအောင် လုပ်ပေးမှာပါ။
အင်္ဂုလိစာကိုပဲ အရေးအဖတ်အပြော ပျံလံနေအောင် လုပ်ပေးဖို့ အဓိကပါ အမ်တီပြုံးရယ်..။ တီလုပ်ပါတတ်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့… သို့သော် တခုကို အဓိကရွေးဂျေးဆို သခင်ဂျီးတွေစာက ဘွတက်လမ်းအတွက် အခရာကျပါတယ်။ အရေးအဖတ်သာမက အပြောပါသွက်ဖို့ မှန်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တမ်းမှာ မလွယ်လှဘူး.. အချိန် ပိုက်ပိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှရတာ…. သဂျီးနဲ့အနော်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပေါရင် အမေရိကန်တွေ နားမလည်၊ အမေရိကန်လိုပေါလျင် အင်္ဂလိပ်တွေနားမလည်… အဲလိုဖစ်နေမယ်..
ပတ်တာအိတ်နဲ့ မိတ်စကပ် မေးမို့လား
ဖုန်းထဲ မှာ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ FB app ကို update လုပ်ရမယ် ထင်ပါကြောင်း
FB app က 8.0. လောက်မှာမှ စပြီး
commentထဲ ပုံထည့်လို့ရတယ် ထင်ပါကြောင်း
ကျနော့် အရင် FB app က ပုံထည့်လို့မရပဲ
အခု update လုပ်ပြီးမှ commentတွေထဲ
ပုံ ထည့်လို့ရတာ ဖြစ်ပါကြောင်းးး
တခြားပို ပြောနိုင်သူတွေ ပြောစေလိုပါကြောင်းး
.ကိုယ်လိုတဲ့အချိန်ပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုတာ ဘဏ်အမျိုးမျိုးအပေါ်မှာနဲ့ အခြေအနေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အခုတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးတော့ ဘယ်ဘဏ်ဖြစ်ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
.မြန်မာပြည်ကဘဏ်တွေမှာငွေအပ်တယ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံဒီအတိုင်းထားရမှာ များလို့ ရှုပ်လို့ ခက်လို့ အပ်ကြရတာပါ။ အတိုးလိုချင်လို့လဲ အပ်တာရှိပေမယ့် ရတာနဲ့ ကာမိပါ့မလားဆိုတာ လူအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒီမှာ ဘဏ်ထဲငွေထည့်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာလို သုံးစရာရှိတိုင်း ကဒ်နဲ့ ချက် နဲ့ ရှင်းလို့မရပါဘူး။ ငွေရှင်းစရာရှိတော့ ကိုယ်တိုင်ဘဏ်ကငွေသွားထုတ်ပြီး ကူလီနဲ့ထမ်း ကားနဲ့သယ်ပြီး ရှင်းရတာပါ။
current account ကတော့ cheque နဲ့ ကြိုက်သလောက်ထုတ်လို့ ရပါတယ် ဆိုတော့ current account ကို saving account နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားမှ လိုချင်တဲ့ အချိန်ပြန်ထုတ်လို့ လွယ်ပါတယ် ။
USD account ကတော့ တစ်နေ့မှusd တစ်သောင်းထက်ပိုမထုတ်ပေးပါဘူး ။ usd account မှာ saving မရှိဘူးထင်ပါသည် ။ သို့သော် ကိုယ့် usd account ထဲ က ဒေါ်လှတွေ ကို အဲ့ဒီ့နေ့ မြန်မာငွေ ပေါက်ဈေးနဲ့ လဲထုတ်မယ် ဆိုရင်တော့ အကုန်ပြောင်အောင်လည်း သတ်မှတ်ဈေး နဲ့ လဲထုတ်လို့ ရပါသည် ။
” မှတ်​ချက်​..နိုင်​ငံသားမည်​သူမဆို အ​ခြေပစ္စည်​းတစ်​ရပ်​ရပ်​ ဝယ်​ယူခြင်​း တည်​​ဆောက်​ခြင်​း ရယူခြင်​း အတွက်​ တစ်​ဦးလျှင်​ တစ်​ကြိမ်​သာခံစားခွင်​့ရှိသည်​ ” ဆိုတာ ဘယ်​လိုမျိုးပါလဲ သိပါရ​စေ။
ဥပမာ နိုင်​ငံခြားသွားြပြီးအလုပ်​လုပ်​တဲ့သူတစ်​​ယောက်​ ရဲ့ လစာနဲ့ သူ့နာမည်​နဲ့အိမ်​ဝယ်​တယ်​ အခြားတစ်​​ယောက်​က ကားဝယ်​တယ်​ ဆိုပါ​တော့။ အခွန်​ကင်​းလွတ်​တဲ့ လစာ​​ငွေနဲ့ဝယ်​တာလည်​းဖြစ်​တယ်​ သူ့နာမည်​နဲ့ ဝယ်​ထားတဲ့အိမ်​/ကားလည်​း အခြားမရှိ​သေးဘူးဆိုရင်​ အခွန်​ကင်​းလွတ်​တယ်​ဆိုတဲ့သ​ဘော ဟုတ်​ မဟုတ်​ သိပါရ​စေ။
ဦးဦးပါလေရာရေ ကျေးဇူးအများကြီးပါရှင်..။ နောက်ထပ် အခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မရှင်းလင်းတာတွေ သိချင်တာတွေရှိပါသေးတယ်။ အခြားသောကိစ္စတွေမှာလည်း မရှင်းလင်းတာ သိချင်တာလေးတွေရှိလို့ အခွင့်အခါသင့်တဲ့အချိန်မှာ မေးပါဦးမယ်ရှင်။
ဒီလိုလေ၊ ကိုယ်က မယားကြီးနေရာကဆိုပါတော့၊ ကိုယ့်မှာက သားတစ်ယောက်လည်းရှိပြီ၊ ပြည်ပကိုလည်း ခဏတဖြုတ်ရောက်နေတယ်။ အိမ်ထောင်သက်ကလည်း ဘာမှ မကြာသေးဘူး။ မြန်မာပြည်က ကိုယ့်ယောက်ျားက နောက်တစ်ယောက်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ မယားကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်က ဒီလိုကြီးပေါ်တင်စော်ကားခံရပြီဆိုတော့ မကျေနပ်ဘူး။ သတင်းစာမှာ ဘာညာကွိကွ ထည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ယောက်ျားကတော့ သူ့မိဘတွေဆီက အမွေဖြတ်ဆိုတာလုပ်ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ထူဖို့ လုပ်လိုက်ပြီ။ အဲဒီမှာ ယောက်ျားက အမွေဖြတ်ဆိုတာ လုပ်လိုက်တော့ ပါရင်းပစ္စည်းဆိုတဲ့အပိုင်းက မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ လင်မယားကွဲရင် လင်ရဲ့ ပါရင်းပစ္စည်း (သူ့မိဘအမွေ) သုံးပုံတစ်ပုံ မိ်န်းမက ရတယ်လေ။ လက်ထက်ပွားကတော့ တစ်ယောက်တစ်ဝက်ပေါ့။ လောလောဆယ်မှာ သူက အမွေဖြတ်လုပ်ချလိုက်တော့ မယားကြီးက ပါရင်းထဲက ဘာမှ မရတော့ဘူးလား။ တကယ်တော့ ဒီအမွေဖြတ်ဆိုတာချည်းကလည်း တရားမဝင်တော့ သူ့မိဘတွေ သေပြီးရင် အမွေက သူပဲပြန်ရမှာလေ။ အဲတော့ ယောက်ျားရဲ့ ပါရင်းပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ နောက်မယားကသာ အကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်ရှိသွားတော့မှာပေါ့။ နောက်မယားအနေနဲ့ အမွေမမက်ဘူးဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်းရ၊ ပစ္စည်းလည်းရ၊ အဲဒီလိုဖြစ်မကုန်ဘူးလား။ တကယ်တော့ ကိုယ်လင်တစ်ယောက်ရဖို့အတွက် သူများ အသိုက်အမြုံကို ဖြိုခွဲနိုင်တဲ့သူ၊ မိန်းမသားချင်း ကို်ယ်ချင်းမစာတဲ့သူ ဟာ နဂိုအခံမှာ မက်ပြီးသားပါ။ အဲတော့ မမချွိသာ မယားကြီးနေရာမှာဆိုရင် ကွာမလား။ (ဟီး … စိတ်ထဲ ကျလိကျလိ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေး မေးကြည့်တာပါ၊ မဖြေတတ်ဘူးဆိုလည်း ရပါတယ်ချင့်)
ကြားထဲ.. အဲဒီကရာတေးသမား.. လာသမ,ရင်.. မျစ်မမရှင်းရမယ်..။
ပိုသေချာအောင်.. အဲဒီလူကိုအင်တာဗျူးမလား..။ ကလေးအမေကိုဗျုးမလား.. တွေးနေတယ်..။ :buu:
ကြားထဲ.. ဒီအိုင်ဒီယာရပြီး. စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်သူ.. ကိုရင်ဆက်ဆက်တော့.. ၁သိန်းမြန်မြန်ပြည့်ကိန်း…
ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အချိန် တို အတွင်း အောက် ဆော့တတ်တဲ့ ယောက်ကျားကို ဆက်ပေါင်းဖို့တော့ အားမပေးချင်။
ဒီ ယောင်္ကျားကို မြဲအောင် မဆွဲထားနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့လေ။
အမှန်တော့ ရှက်တတ်ရင် အဲလို ဖောက်ပြန်တဲ့ သစ္စာဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ဖောက်ဖျက်တဲ့သူမျိုးကသာရှက်ရမှာဖြစ်ပြီး